Search က​လေးလိုးကား - BajarFB.com
Search Results - က​လေးလိုးကား
ဂဝံလှိုင်​ဂူ​တော်​စခန်း မှတ်​တမ်း အချို့. စိတ်​ထဲသတိရတာနဲ့ ကလိလိုက်​တာ. ဓာတ်​ပုံ.သူများဟာ​ရော ကိုယ့်​ဟာ​ရော.
ဂဝံလှိုင်​ဂူ​တော်​စခန်း မှတ်​တမ်း အချို့. စိတ်​ထဲသတိရတာနဲ့ ကလိလိုက်​တာ. ဓာတ်​ပုံ.သူများဟာ​ရော ကိုယ့်​ဟာ​ရော. Ramanyatharlay Yannaingsoe 12 May 2017 · 617 views
♪ ♪ ♪ ......♪ ♪ ♬ ♬ ♬ ♬ .....အချစ်​ကိုလဲ လက်​ခံတယ်​♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ .....အမုန်းကိုလဲလက်​ခံတယ်​..........♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♬ ♬ ♬ ♬
♪ ♪ ♪ ......♪ ♪ ♬ ♬ ♬ ♬ .....အချစ်​ကိုလဲ လက်​ခံတယ်​♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ .....အမုန်းကိုလဲလက်​ခံတယ်​..........♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♬ ♬ ♬ ♬ Nang Nang Nhtat 13 Oct 2016 · 381 views
အစကအိပ်​​နေတာဇက်​ကိုကျိုးလို့ ကလိလိုက်​​တော့မှနိုးသွားတာ😛 သားသားရုပ်​ဆိုး ငချွဲ​လေး
အစကအိပ်​​နေတာဇက်​ကိုကျိုးလို့ ကလိလိုက်​​တော့မှနိုးသွားတာ😛 သားသားရုပ်​ဆိုး ငချွဲ​လေး Su Linn Htet 23 Oct 2017
Lagu Despacito terbaru ☺
Lagu Despacito terbaru ☺ Andika Syahputra 27 Sep 2017 · 1.1K views
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ဒေါ်လာလေးသန်းခွဲ ကူညီမည် *************************************************** လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ ရေဆိုး စွန့်ပစ်ရေးစနစ်အတွက် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (UNIDO)က အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသန်းခွဲအကူအညီ ပေးသွားမယ်လို့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က တည်းက စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းဝေးမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်မှုဇုန်(၂၉)ခုက တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တစ်ဇုန်ချင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား၊ စက်မှုဇုန်တည်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သုတေသနပြု လေ့လာခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေးစနစ်အတွက် ထောက်ပံ့မယ့်အကြောင်းကို ကုလလက် အောက်ခံ (UNIDO) အဖွဲ့က ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်က တာဝန်ရှိသူတွေထံကို တိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အသိပေးပြောဆိုမှုအရသိရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအေးသောင်းက ပြောပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေကရေဆိုးစွန့်ပစ် တာတွေကြောင့် စက်မှုဇုန်အနီး လူနေရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူတွေနဲ့ စက်မှုဇုန်ကတာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာ မကြာခဏ ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေအတွင်းရှိ စက်ရုံတွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်းတာတွေ တွေ့ရှိတဲ့အတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေတာတွေကို ပြုလုပ်နေရတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်ရေးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေး မှူး စက်မှုဇုန်များတာဝန်ခံအရာရှိ ဦးမောင်မောင်လွင်က ပြောပါတယ်။ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေးစီမံကိန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူညီမှု ရထားပေမယ့် အသေးစိတ် အခြေအနေကိုတော့ တိတိကျကျ မသိသေးဘူးလို့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ပြောပါတယ်။ယခင်ကရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာရှိတဲ့ ရေထုတ်မြောင်းတွေမှာ ကျူးကျော်တွေဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် ရေဆိုးထုတ်ပစ်မှုအခက်အခဲအပြင် မိုးတွင်းရောက်တိုင်း ရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရာကနေ လက်ရှိအချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှု ပြေလျှော့နေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (UNIDO) အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ (၅) ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးမှုတွေ လာရောက်ပြု လုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို Central News Bureau က ရန်အောင်ထွန်း ပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ဒေါ်လာလေးသန်းခွဲ ကူညီမည် *************************************************** လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ ရေဆိုး စွန့်ပစ်ရေးစနစ်အတွက် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (UNIDO)က အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသန်းခွဲအကူအညီ ပေးသွားမယ်လို့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က တည်းက စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းဝေးမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်မှုဇုန်(၂၉)ခုက တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တစ်ဇုန်ချင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား၊ စက်မှုဇုန်တည်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သုတေသနပြု လေ့လာခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေးစနစ်အတွက် ထောက်ပံ့မယ့်အကြောင်းကို ကုလလက် အောက်ခံ (UNIDO) အဖွဲ့က ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်က တာဝန်ရှိသူတွေထံကို တိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အသိပေးပြောဆိုမှုအရသိရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအေးသောင်းက ပြောပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေကရေဆိုးစွန့်ပစ် တာတွေကြောင့် စက်မှုဇုန်အနီး လူနေရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူတွေနဲ့ စက်မှုဇုန်ကတာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာ မကြာခဏ ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေအတွင်းရှိ စက်ရုံတွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်းတာတွေ တွေ့ရှိတဲ့အတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေတာတွေကို ပြုလုပ်နေရတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်ရေးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေး မှူး စက်မှုဇုန်များတာဝန်ခံအရာရှိ ဦးမောင်မောင်လွင်က ပြောပါတယ်။ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေးစီမံကိန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူညီမှု ရထားပေမယ့် အသေးစိတ် အခြေအနေကိုတော့ တိတိကျကျ မသိသေးဘူးလို့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ပြောပါတယ်။ယခင်ကရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာရှိတဲ့ ရေထုတ်မြောင်းတွေမှာ ကျူးကျော်တွေဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် ရေဆိုးထုတ်ပစ်မှုအခက်အခဲအပြင် မိုးတွင်းရောက်တိုင်း ရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရာကနေ လက်ရှိအချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှု ပြေလျှော့နေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (UNIDO) အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ (၅) ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးမှုတွေ လာရောက်ပြု လုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို Central News Bureau က ရန်အောင်ထွန်း ပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ One News Myanmar 13 Oct 2017 · 472 views